Inona no Lazain’ny Baiboly Momba ny Sary Vetaveta sy ny Cybersexe?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Asamey Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Féroïen Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kyangonde Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Masedonianina Mooré Myama Norvezianina Nzema Ossète Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tiorka Tseky Tsonga Télougou Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Inona no Lazain’ny Baiboly Momba ny Sary Vetaveta? Ratsy ve ny Cybersexe?
Tsy miresaka mivantana momba ny sary vetaveta, na cybersexe, na zavatra hafa mitovitovy amin’izany ny Baiboly. Resahiny mazava anefa fa tsy ankasitrahan’Andriamanitra ny zavatra mampirisika ny olona hanao firaisana ivelan’ny fanambadiana, na hanana fomba fijery diso momba ny firaisana. Diniho ireto andinin-teny ireto:
“Koa vonoy ireo fironan-dratsy ao amin’ny rantsambatanareo, dia fijangajangana, fahalotoana, filan’ny nofo.” (Kolosianina 3:5) Tsy mamono ny fironan-dratsiny anefa ny olona mijery sary vetaveta, fa vao mainka mandrehitra izany. Mahatonga azy haloto eo anatrehan’Andriamanitra izany.
“Izay rehetra tsy mitsahatra mijery vehivavy ka maniry hanao firaisana aminy, dia efa nanitsakitsa-bady tao am-pony sahady.” (Matio 5:28) Mahatonga ny olona hanana eritreri-dratsy, izay mitarika azy hanao ratsy, ny sary vetaveta.
“Aoka tsy hotononina eo aminareo akory izay resaka momba ny fijangajangana sy izay rehetra mety ho fahalotoana na izay faniriana tsy mety afa-po.” (Efesianina 5:3) Tsy tokony hahafinaritra antsika ny miresaka momba ny firaisana mamoafady na fijangajangana, mainka moa fa ny hijery na hamaky momba izany.
“Miharihary ny asan’ny nofo, dia fijangajangana, fahalotoana, ... ary ny toy ireo. Ny amin’ireo zavatra ireo no ampitandremako anareo mialoha, toy ny efa nampitandremako anareo rahateo, fa tsy mba handova ny fanjakan’Andriamanitra izay mpanao an’ireo.” (Galatianina 5:19-21) Maloto na ratsy fitondran-tena eo imason’Andriamanitra ny olona mijery sary vetaveta, na manao cybersexe, na mandefa hafa-beta (sextos). Tena tsy hankasitrahan’Andriamanitra isika raha zatra manao an’ireo.
Sary vetaveta: Filma na sary na soratra momba ny firaisana natao hanairana ny faniriana hanao firaisana.
Cybersexe: Hafatra na resaka momba ny firaisana amin’ny alalan’ny Internet, izay natao hanairana ny faniriana hanao firaisana.
Firaisana an-telefaonina: Mampiasa telefaonina mba hanaovana resaka momba ny firaisana, na hihainoana hafatra vetaveta.
Hafa-beta (sextos): Mandefa sary na hafatra vetaveta amin’ny alalan’ny finday.
Tsy Mampaninona ve ny Mijery Sary Vetaveta?
Raha misy olona mijery sary vetaveta, inona no vokatr’izany eo aminy sy eo amin’ny fianakaviany?
Misy mampirisika anao handefa ny sarinao miboridana amin’ny alalan’ny telefaonina ve? Tsy mampaninona ve ny manao an’izany?
Melohin’ny Baiboly ve ny Sary Vetaveta?
Mety ve ny Manao Firaisana mba Hahazoana Fahafinaretana?